AirPlay 2 uye HomeKit ikozvino inowirirana neToshiba Smart TV kubva muna 2020 | Ndinobva mac
Pazvakaita senge AirPlay 2 uye HomeKit rutsigiro rwaisazosvika kune vamwe vagadziri veTV, nhasi tamuka nemamwe mashoko akanaka kune veInsignia naToshiba brand TV varidzi avo rova musika mu2020.
Vaviri vagadziri vakaburitsa nyowani firmware yekuvandudza iyo inobvumidza mamodheru akarova pamusika muna 2020, kutenderera zvirimo kubva kuMac, iPhone uye iPad kuenda kuterevhizheni pasina kushandisa Apple TV kana chero chimwe chishandiso. Uye zvakare, inobvumidza dzora materevhizheni uchishandisa mirairo yezwi uye kuburikidza nekushandisa kweKumba.
AirPlay 2 uye HomeKit vakawedzera kusvika kwavo kune akati wandei-echitatu-bato zvishandiso mumakore apfuura. Iyo huru inogadzira TV, Samsung uye LG ndivo vakatanga kutsigira vese AirPlay 2 uye HomeKit, kunyangwe iyo inogadzira LG yakaganhurira huwandu hweanokwidziridzwa mamodheru akange atosvika pamusika panguva yekuzivisa.
Sony anga ari mumwe wevanogadzira izvo iyo yakareba yakatora kugadzirisa firmware yemamodeli yatowanikwa pamusika, asi sezviri kutaurwa neshoko: zvirinani kunonoka kupfuura kusati kwamboitika.
Ese ari maviri Toshiba 4K UHD Smart Fire TV 2020 neDolby Vision uye iyo Insignia 4K UHD Smart Fire TV 2020 ndiwo maviri mamodheru. vatengesi vevagadziri vese ayo atove anowirirana neAirPlay 2 uye HomeKit.
Kana iwe uine chero eizvi zvigadzirwa, iwe unofanirwa kuteedzera iyo yekuraira mirawo inoonekwa pachiratidziro kuti ukwanise kudzora TV kuburikidza neImba application, kana neSiri mirairo. Kuburikidza neapp yekumba, tinogona batidza uye bvisa TV, gadzirisa vhoriyamu uye chinja sosi yekuisa.
Kuti titumire zvirimo kuburikidza neAirPlay 2, isu tinongofanirwa kuenda kune chishandiso chatiri kuda kugovana zvirimo tinya Duplicate skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » AirPlay 2 uye HomeKit izvozvi zvinoenderana neToshiba's 2020 Smart TV
Mactracker Kugadziridza neNew 24 "iMac M1, iPad Pro uye Zvimwe
Microsoft inozivisa Windows 365 zvichibva mubrowser inoenderana neApple Silicon